Maxay salka ku haysaa booqashada Madaxweynihii hore Nigeria ee Somaliland?
HARGEYSA, Somaliland - Madaxweynihii hore ee Nigeria, Olusegun Obasanjo oo dalkaas madaxweyne ka soo noqday intii u dhaxeesay sanadihii 1999-kii ilaa 2007-dii ayaa shalay booqasho ku tagay magaalada Hargeisa ee xarunta Somaliland.
Madaxweyne Obasanjo ayaa garoonka magaalada Hargeysa waxaa kusoo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka Somaliland, xubno ka mid ah golaha wasiirada, duqqa caasimada, mas'uuliyiin katirsan axsaabta siyaasadda ee Somaliland, waxaana uu booqasho ku tegay xarumaha golaha wakiillada iyo maxkamadda sare, halkaas oo uu kula kulmay saraakiil katirsan laamaha kala duwan ee dowladda oo ay kamid yihiin waaxda garsoorka.
Kulan uu Obasanjo halkaas kaga qeyb galay ayaa waxaa ka soo qeyb galay madaxweynaha Somaliland, shir-guddoonka goleyaasha guurtida iyo wakiillada, madaxda axsaabta qaranka, saddexdii madaxweyne-ku-xigeen ee Somaliland soo maray, wasiirro iyo haldoor kale oo reer Somaliland ah, waxana halkaas laga jeediyey hadallo loogu mahadnaqay, islamarkaana lagu sharraxay horumarka ay Somaliland ku tallaabsatay.
Obasanjo oo ah guddoomiyaha Hay'adda Brenthurst Foundation oo waddamada qaaradda Afrika ka caawisa arrimaha la xidhiidha dhaqaalaha oo goobta hadal ka jeediyey, ayaa si weyn u bogaadiyay midnimada uu sheegay inay ka muuqata qaybaha kala duwan ee Bulshada.
Obasanjo ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in sababta uu Somaliland u yimid ay salka ku hayso sidii uu wax badan uga ogaan lahaa xaaladda dhabta ah ee ka jirta Somaliland, isaga oo shacabka Somaliland iyo xukuumaddana ugu baaqay inay sii adkeeyaan xasilloonida.
"Waxaan halkan u imid in aan aragno oo indho indhayno oo aannu dhegaysanno, ilaa imikana waxannu aragnay waxyaabo waaweyn oo aad qabsateen, waxaad haysataan nabad, ammaan iyo horumar, waxaana aan idinku dhiirrigelinayaa inaad sii joogtaysaan.", ayuu yiri Obasanjo.
Kullankaas ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay wasiirka Maaliyadda ee Somaliland, Dr. Sacad Cali Shire oo si weyn ugu mahadnaqay Obasanjo, isagoona ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee ay Somaliland soo martay.
Olusegun Obasanjo ayaa horay uga soo qeyb qaatay dedaallo nabadeed oo uu ka sameeyay dalal ay kamid tahay Kenya, oo sanadkii 2007-dii uu ka dhacay qalalaase ka dhashay doorashadii lagu murmay.
Waxaa siyaasiyiintaas socdaallada kala duwan ku tagay Hargaysa kamid ah, Xoghayahii hore ee difaaca dalka Ingiriiska Gavin Williamson, oo 6-dii Janaayo ee sanadkan booqasho ku tagay Hargeysa, isagoo halkaas wadahadallo kula yeeshay Madaxweynaha Jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland, Muuse Biixi Cabdi.
Waxaa sidoo kale socdaallo kuwaas lamid ah Hargeysa ku tagay saraakiil kala duwan oo ka socday Midowga Yurub, Qaramada Midoobay iyo Hay'ado kale oo calaami ah, ayadoo ay halkaas booqdeen danjireyaal kala duwan oo caalamka u fadhiya Soomaaliya iyo dawladaha kale ee gobolka.
Is-araga ban-baxsan ee mas'uuliyiinta labadda dhinac ayaa dhif ah, inkasta oo midkan uu ka dhashay hadal-heyn.
Nuxurka warqadii uu Muuse Biixi kaga jawaabay booqashada Farmaajo
Soomaliya 25.02.2020. 07:30